किच्कन्या छ ? « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : 2022 January 13, 2:42 pm
किच्कन्याको काल्पनिक कथाहरु बनेका छन् । राजा महाराजासँग जोडेर किचकन्याको कथा बनाइएका छन् । तर, के किचकन्या अस्तित्वमा छ ?
कतिपयले किच्कन्या भेटेको या किचकन्याले लखेटेको भन्ने गरेका छन् । किच्कन्या नेपाल र भारतीय समाजमा प्रचलित किम्वदन्ती र कथाहरुको भूत हो । यसले महिलालाई कुनै हानीनोक्शानी पुर्याउँदैन पुरुषलाई भने हानी पुर्याउनेगरेको विश्वास छ । तर, किचकन्याबारे अहिलेसम्म वैज्ञानिक प्रमाण फेला परेको छैन ।
भारतमा किचकन्यालाई चुडैल पनि भन्ने गरिन्छ । तर, चुडैलभन्दा किचकन्या केही भिन्न मानिन्छ । यसले हानी नोक्शानी पनि पुर्याउने गरेको बताइन्छ ।
किचकन्या चिहानबाट निस्कने गरेको बताइन्छ । मध्यरातमा चिहानबाट निस्कने र उज्यालो हुनेवित्तिकै फर्कने गर्छिन् । रातको समयमा पुरुषलाई भेटेमा यीनले आफ्नो पासोमा पार्छिन् । किचकन्याले मानिसलाई मार्ने या नोक्शानी पारिहाल्ने गर्दिनन् । तर, यीनले आफूसँग सम्बन्ध बनाएर पल्काउँछिन् । सम्बन्धमा मोहित पुरुष विस्तारै सुक्दै जान्छ र मृत्युको अवस्थामा पुग्छ ।
किच्कन्यासँग मोहित पुरुषलाई छुटाउन तन्त्रमन्त्रबारे पनि सुनिएको छ । तान्त्रिकले किचकन्यासँग फसेको पुरुषलाई धागो दिने र सम्बन्धको समयमा धागो बानिदिन लगाउँछ । लामो धागोका कारण किचकन्या कुन स्थानबाट निस्केकी हुन् पत्ता लाग्छ । त्यस स्थानमा हड्डी भेटिन्छ । हड्डीलाई नष्ट गरेर र तन्त्र मन्त्र गरेर किचकन्या आउन नसक्ने बनाइन्छ । यसको अर्थ यो मृत महिलाको भड्केको आत्मा हो ।
अहिलेसम्म किचकन्याबारे कुनै प्रमाणित तथ्य नभेटिएकाले यसलाई अन्धविश्वासकै रुपमा लिइन्छ ।